ဘန်ကောက်မြို့ anti-အိုမင်းခြင်းဟာကြီးထွားဟော်မုန်း - ထိုင်းနိုင်ငံတွင် HGH ကုထုံး
1999 အတွက်အမျိုးသားရေး Institute ကို ထုိင္းႏုိင္ငံ အိုမင်းအပေါ် (လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအစားထိုးကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုမှသက်ဆိုင်ရာကသူ့အများအပြားအရေးကြီးသောလေ့လာမှုများ၏တဦးတည်းထုတ်ဝေထားပြီးHGH) ဒီလေ့လာမှုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်နှင့်အဖွင့်ဟော်မုန်းကုသမှု HGH ၏ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် Anti-အိုမင်းအတွက် HGH ၏အလားအလာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောဆေးဘက်အသိပညာမြှင့်တင်ရန်လိုတစ်ဦးမျှမျှတတလေ့လာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုရလဒ်များအရအိပ်ယာ၏ထိုးလက်ခံရရှိသော်လည်းစမ်းသပ်အုပ်စု HGH ၏ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးကကို double-မျက်စိကန်းသောလေ့လာမှု HGH
ဆရာဝန်တွေမဟုတ်သလိုလူနာမ HGH ၏ထိုးလက်ခံရရှိသူကိုသိတယ်, ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာထိုးသွင်းဆိုလိုသည်မှာသဘာဝအားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုကို double-မျက်စိကန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းထိုင်းနိုင်ငံတလွှားကနေဆေးခန်းများပါဝင်သောအမျိုးသားအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုလူနာနှင့်လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းများချို့တဲ့ခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူအချို့သောပါဝင်ခဲ့။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏အရာဝတ္ထု၏တစ်ဦးအုပ်စုအရွယ်အစားအတွက်သိသာထင်ရှားသောတို့အရေးပါမှုကိုပင်နိမ့်စံချိန်စံညွှန်းများ detect လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရမြင့်မားများကိုနိုင်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုဟာလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကို အသုံးပြု. အစားထိုးကုထုံးမှအဓိကအားကျိန် ဆို. ပူဇော်ခဲ့ပေမယ့်လိုအပ်ပါက, လူနာလည်း testosterone ဟော်မုန်း, အဓိကချို့ယွင်းခြင်းနှင့်အီစထိုဂျင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုသရုပ်ပြနှင့်ထိုကဲ့သို့သော testosterone ဟော်မုန်း, အဓိကချို့ယွင်းခြင်းနှင့်အီစထိုဂျင်ကဲ့သို့သောအခြားဟော်မုန်းကဲ့သို့ဖို့မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာ HGH ထိုး၏ကုထုံးအလားအလာမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Thierry Hertoghe, HGH ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းများချို့တဲ့ခြင်းခံစားနေရပြီးလူနာမှပေးခဲ့သည့်အတွက်လက်တွေ့လေ့လာမှုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလူနာတစ်ဦးအလွန်ကျယ်ပြန့်အသက်အပိုင်းအခြားရှိခဲ့သညျ။ အငယ်ဆုံးလူနာ 27 အသက်အသက်အကြီးဆုံးလူနာ 82 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏အစအဦး၌, ဒေါက်တာ Hertoghe နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်စေ့စပ်အားလုံးလူနာများ၏အခြေအနေကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
သူတို့လူနာများ၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်သူတို့နှစ်လအတွင်းအစားထိုးဆေးထိုးဟော်မုန်း HGH ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒေါက်တာ Hertoghe ကသူ့လူနာနှင့်အတူတွေ့ရှိပြီးသူတို့လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းထိုးဆေးအနေဖြင့်လက်ခံရရှိသောအရာကိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းပြနေတဲ့မေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု. ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ဖြေကြားသောစစ်တမ်းတစ်ခုဖြည့်စွက်ဖို့သူတို့ကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ။ အောက်ပါအပေါငျးတို့သမေးခွန်းလွှာ၏မေးခွန်းများကိုနှင့်သူတို့၏အခွအေနေတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြတုန့်ပြန်တဲ့သူလူနာများ၏ရာခိုင်နှုန်းများစာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်မှာအရေးအကြောင်းတွေ၏လျှော့ချအရေအတွက်ကို - 75,5%
အရေးအကြောင်းတွေ aging.The အရေပြားအများဆုံးမြင်နိုင်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ယင်း၏ elasticity နဲ့တန်ဆာဆုံးရှုံးဖို့အစပြုကြောင့်အလင်းလိုင်းများနှင့်နက်ရှိုင်းသောအရေးအကြောင်းတွေအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းထိုးဆေးကနေအကျိုးကြသူလူနာအများစုသည်အဆိုပါ HGH ဒဏ်ငွေလိုင်းများပျော့ပျောင်းသို့မဟုတ်အရေးအကြောင်းတွေ၏ပျောက်ဆုံးမှုမှဦးဆောင်မူကြောင်းကိုညွှန်ပြ။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေနဲ့ထိုးအရေပြားဆဲလ် moisturize နှင့်အရေးအကြောင်းတွေ၏ပျောက်ဆုံးမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှစ်ဦးစလုံး၏မျက်နှာကကြွက်သားတွေ၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်စေရန်နိုင်ကြသည်။
လည်ပင်းနှင့်မျက်နှာပေါ်မှာတင်းကျပ်တဲ့အသားအရေ - 67%
ပိုများသောအစိုင်အခဲကြွက်သား 60.7% ဖြစ်ပါသည်
တကျိပ်လူနာထဲကထက်ပိုခြောက်လဒေါက်တာ Hertoghe ၏လေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်း, HGH ထိုးနှစ်ခုလအတွင်း, ကြွက်သားသေံပြောင်းလဲသွားတယ်။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကြွက်သားနှင့်သူတို့၏အစွမ်းသတ္တိ၏ဗေဒအသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကြွက်သားသေံကဲ့သို့တိုးမြှင့်နှင့်ကြွက်သားအရွယ်အစားနိုင်ခဲ့သည်။ လူနာလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ကျန်းမာအဆင့်ဆင့်ရှိပါကကြွက်သားအထူးသဖြင့်အချို့အသုံးဝင်သောလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်အတွက်ကြွက်သားကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက် 1 ၏ပုံစံကိုပိုမိုစွမ်းအင်နှင့်လောင်စာရပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အဆီ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ကို - 48%
၏ရလဒ်အဖြစ်ဤလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူလူနာများ၏ထက်ဝက်ခန့်မှာ HGH ထိုး ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုအလွန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေမယ့်အထူးသဖြင့်နှစ်လယ်ပိုင်းအပိုင်းန်းကျင်ကိုဘယ်လိုကြွက်သားနဲ့တိရစ္ဆာန်အဆီသိုက်ကိုထိခိုက်ဇီဝြဖစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, ပါဝင်သည်။ အသည်း IGF-1 သို့ HGH လှည့်နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အဆီတစ်သျှူးဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်အပိုစွမ်းအင်သို့လှည့်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်!
% 34.5 မှတစ်ဦးကထူ, ပိုမိုအားကောင်းသားရေ
ဖြေဆိုသူထက်ပိုတတိယအသားအရေအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲမှတ်ချက်ချသည်။ ဒီလိုလူနာအရေပြား၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေ့ကြုံ။ အဆိုပါရလဒ်ကြွက်သားတင်းမာမှုနှင့်တိုးမြှင့်ဆဲလ်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ sagging အသားအရေကိုသာပျောက်ကွယ်သွားဖို့စိတ်သဘောထားရှိသည်ပေမယ့်ဒီဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအသားအရေရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နဲ့ volume တိုးမြှင့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အခြားမည်သည့်ဆဲလ်များကဲ့သို့အရေပြားဆဲလ်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ function ကိုလိုအပ်သည်။ အရေပြားဆဲလ်တွေအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အဆိုပါခြားနားချက်အရေပြားထိုကဲ့သို့သောနေရောင်ခြည်, အပူချိန်နှင့်လေအဖြစ်အမြဲတစေပြင်ပဖိအားထိတွေ့ကြောင်းတစ်ခုကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းဒြပ်စင်ကနေအရေပြားကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်တားဆီး, ခိုင်မာတဲ့မြဲနေဖို့အရေပြားကူညီပေးသည်ရာနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကနေခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။
တိုးမြှင့်ဆံပင်အသံအတိုးအကျယ် - 28,1%
ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်သူ၏လေးပုံတပုံထက်ပိုပြီးလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ထိတွေ့မှု၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ဆံပင်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံ။ ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်မဟုတ်ဘဲတတိယအဆင့်ဖြစ်သော်လည်း HGH ကုသမှုယူသောသူတို့၏အမျိုးအသိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ကုသမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဆံပင်စဉ်းစားပါ။ အရေပြားဆဲလ်သင့်လျော်စွာ rehydrate နှင့်နုပျိုသည့်အခါလည်းဆံပင်ရဲ့ကျန်းမာရေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဆံပင်အရေပြားကျန်းမာရေးကိုလည်းဆံပင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍဒါကြောင့်ရိုးရိုးအရေပြားဆဲလ်တစ် Deactivate အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ဟော်မုန်းကုထုံး၏သိမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ germanosilicate အသုံးပြုမှု, လူ့တိုးတက်မှုနှုန်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟန်ချက်အတွက်တစ်ဦးကအထွေထွေတိုး - 71,4%
လူနာနီးပါးလေးပုံသုံးပုံအထွေထွေစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်တစ်ခုတိုးတက်မှုခံစားခဲ့ရသညျ။ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်သည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသောလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းများချို့တဲ့ခြင်းဟာလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းများချို့တဲ့ခြင်းစိတ်ကျန်းမာရေးပိုဆိုးလာနိုင်သည်ကိုနောက်ထပ်သက်သေသာဓကသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာကိုပိုပြီးခံသာနဲ့ပျော်စရာစေရန်အများအပြားလူနာတွေအတွက်, HGH ရုံနိုင်ကြ။ ဤသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကနေပျေါပေါကျကြောင်း Self-အမြင်ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ HGH လည်းဦးနှောက်ဓာတုဗေဒပိုကောင်းအောင်နိုင်စွမ်းပါ!
တိုးမြှင့်စွမ်းအင်ကိုအဆင့်ဆင့် - 86.8%
လေ့လာမှုမှာပါဝင်လူနာများထဲတွင်။ Thierry နီးပါးတိုင်း9လူနာထဲက 10 စွမ်းအင်တိုးလာအဆင့်ဆင့်ခံစားခဲ့ရသညျ။ မမှန်ကနေဆငျးရဲဒုက်ခသူအများစုမှာလူနာများ, HGH ချို့တဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အဖြစ်တငျပွ။ HGH သင်ကတပ်လှန့်ခြင်းနှင့်တစ်ရက်ယူဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိနေဖို့ကူညီပေးနေ, ကိုယ်ခန္ဓာကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းအကွောငျးရငျးမြားစှာအဘို့ဤနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအိပ်ပျော်၏ရလဒ်အဖြစ်ပြန်လည်နုပျိုခြင်းအတွက်အဆုံးစွန်ကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးပွါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်း IGF-1 ၏ရလဒ်အဖြစ်တိရိစ္ဆာန်အဆီ၏ပြိုကွဲ, ဓာတုအဆင့်တွင်စွမ်းအင်ကိုခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း။ ဖြစ်ပါသည်
တိုးမြှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံ - 86,04%
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ဖြေဆိုသူ 85 ကျော်% ။ Thierry အဆိုပါ HGH ထိုး၏ရလဒ်အဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ထားပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကြွက်သားတိုးမြှင့်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဇီဝြဖစ်၏တိုးချဲ့အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြသည်။ စွမ်းအင်အတွက်ဒီတိုးဤလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်တိုးအပြင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများတိုးချဲ့အဆင့်ဆင့်ကိုဆီးတားဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒါ့အပြင်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး HGH ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဒဏ်ရာပြီးနောက်ပြန်လည်သက်သာမှာနှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ အိပ်စက်ခြင်း၏နာရီအတွင်းတိုးလှုပ်ရှားမှု Rejuvenating သင်ဟာမောပန်းခြင်းခံစားခြင်းမရှိဘဲပိုပြီးမကြာခဏခက်ခဲလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နိုငျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။
သငျသညျနည်းပါးလာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုနှင့်အတူနှောင်းပိုင်းကအိပ်ရာသို့မသွားနိုင် - 82,5%
လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေနဲ့အစားထိုးကုထုံးသည်အိပ်ပျော်ထဲကအများဆုံးရရန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ HGH အဓိကအားညမှာလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် wear ကနေပြန်လည်သက်သာလာသောအခါဒီဖြစ်ပေါ်, တစ်နေ့တာအတွင်းစုဆောင်းမျက်ရည်။ HGH ၏ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်, ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာအိပ်စက်ခြင်း၏အပြည့်အဝအကျိုးခံစားခွင့်ကြုံနေရသည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကနေခံစားနေကြရသည်။ အများဆုံးအသုံးဝင်ရှစ်နာရီညဥ့်အချိန်တွင်အိပ်ပျော်ခြင်းရှိသင့်ပေမယ့်လိုအပ်ပါကကျန်းမာ HGH အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလူနာ, လျော့နည်းအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူပိုပြီးအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အလယ်အလတ်အိပ်ပျော်ခြင်းမမှန်ခံစားနေရပြီးလူနာ HGH ခန္ဓာကိုယ်၏သဘာဝခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ရစ်သမ်ပြန်လည်ကျန်းမာအိပ်စက်ခြင်းအလေ့အထ restore ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုဆီးတားတိုးမြှင့်စွမ်းရည် - 83,7%